समीक्षा अधिकारीलाई लिएर दुई संगीतकार बीच “लफडा” ! टंक बुढाथोकीलाई वसन्त सापकोटाले यसो भने ! - पलपलका खबर
काठमाडौँ- नेपालका दुई चर्चित संगीतकार बीच विवाद उत्पन्न भएको छ । संगीतकार तथा गायक वसन्त सापकोटा र टंक बुढाथोकीबीच एक फेसबुक स्ट्याटसलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको हो।
गायक तथा संगीतकार टंक बुढाथोकीले आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गरेको एक स्ट्याटसको विषयमा यी दुई बीच विवाद उत्पन्न भएको जस्तै देखिएको छ। टंकले गायिका समीक्षा अधिकारीलाई आफ्नो सङ्गीतको पहिलो काम गराएको भन्दै उल्लेख गरेका छन्। जसलाई लिएर संगीतकार सापकोटाले आपत्ति जनाएका छन्।
आइतबार टंक बुढाथोकीले सामाजिक संजालमा समीक्षा पहिलो पटक आफूसँग काम गर्न आएको र आफ्नो संगीतमा पहिलो काम गरेको भन्दै पोष्ट गरेका छन्।
फेसबुकमा उनी लेख्छन्,”नमस्कार । हजुरहरु धेरैको प्रतिकृया अनुसार समीक्षा अधिकारी नानी स्टुडियो नायन (९) सम्म आइपुग्नु भएको छ र मेरो सङ्गीतको पहिलो काम गराएकु छु । नानीलाई हेरेर सबैले साथ दिनहुन अनुरोध गर्दछु ।”
स्ट्याटस संगै उनले,”टंक बुढाथोकीसँग काम गर्दै समीक्षा, काम गरेको पैसा पाउँदा खुशी” शिर्षकको भिडियोको युट्युब लिंक पनि राखेका छन्।
टंकको उक्त स्ट्याटसप्रति आपत्ति जनाउँदै संगीतकार वसन्त सापकोटाले अग्रजलाई सम्मान गर्न सुझाउँदै सामाजिक संजालमा स्ट्याटस राखेका थिए। जस मार्फत उनले समीक्षाको यसअघि नै नाई नभन्नु ल ५ को गीत बालापनको उमेर बोलको गीत सबैतिर चर्चित भइसकेको जानकारी पनि गराएका छन्।
सापकोटाले आपत्ति जनाउँदै लेखेका छन्, “टंक भाइ अग्रजहरुको सम्मान गर्न सीकौं ल, समीक्षाको पहिलो गीत चलचित्र नाई नभन्नु ल ५ को गीत बालपनको ऊमेर सबैतिर चर्चित भइसकेको र सबैको प्रेरणाले नानी अगाडि बढिरहेको अवस्थामा यो काम त सूर्यलाई हत्केलाले छोप्न खोजेजस्तो भएन र ? कि भाइ अर्कै दुनियाँबाट आउनु भएको हो । तपाईंको यो लेखाइले तपाईंको उचाइ कम गराउँछ । यसले न समीक्षालाई फरक पर्छ न मलाई फरक पर्छ ।”
टंकको उक्त स्ट्याटस प्रति सामाजिक संजालमा धेरैले आप्पति जनाएको देखिएको छ। समीक्षाको विषयलाई लिएर टंक बुढाथोकी सामाजिक संजालमा चर्को आलोचना खेपिरहेका छन्।
तर कहिले पनि बुझाइमा कमि भएको भन्दै टंकको समर्थन गरिरहेको पनि सामाजिक संजालमा देखिएको छ। टंकको स्ट्याटसको आसय नबुझी टिप्पणी गरिएको भन्दै केहिले अप्पति जनाएको सामाजिक संजालमा देख्न सकिन्छ।
Previous Article प्रधानमन्त्री आउने भएपछि रातरात वाटो कालोपत्रे
Next Article जापान जान सर्टिफिकेट भन्दा पनि भाषा चाहिने ! यस्ता छन् जापानसँग भएको श्रम समझदारीका विशेषता !